बाग्लुङमा १४ शव भेटिए, चार जनाको सनाखत, काे काे छन्? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > बाग्लुङमा १४ शव भेटिए, चार जनाको सनाखत, काे काे छन्? हेर्नुस्
काठमाडौं । बुधबार रातिको बाढी र पहिरोले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङमा मृत्यु भएकामध्ये चार शवको सनाखत भएको छ । सनाखत हुनेमा ढोरपाटन–९ की २६ वर्षकी केशमाया विक, ४५ वर्षीय विरे विक, २२ वर्षीय जीवन विक र ११ वर्षीय डल्ले विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको शव बुर्तिबाङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ । पहिचान भएकाहरुको पोष्टमार्टमको काम आज हुने छ ।
१० शवको अझै सनाखत हुन नसकेको प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले बताए । बुधबार राति आएको बाढी र पहिरोले वस्तीमा क्षति पुर्याएको छ । केही मानिसले भागेर ज्यान बचाए भने कतिलाई भाग्ने क्रममै खोलाले बगाएको थियो । बगाएकामध्ये केहीको अधिकारीचौर, बुर्तिवाङ र बडिगाड गाउँपालिकासम्म शव भेटिएका छन् ।
कतिपय शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएकाले पहिचान गर्न नसकिएको उद्धारमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह भण्डारीले बताए । बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी छ । आज बिहानैदेखि खोजी शुरु भएको छ । स्थानीयले ३५ जना बेपत्ता भएको बताएका छन् । कतिपयको घरमा पाहुनाहरु पनि आएकाले बेपत्ता भएकाहरुको संख्या एकिन भएको छैन ।
पहिरोले फलेघर र सुपुर्दुङका दर्जन बढी घर बगाएको छ भने वडा नं. ८ सम्म आइपुग्दा ४० घर बगेका छन् । अधिकांश घरको भग्नावशेषसमेत देखिएको छैन । बस्ती भएको स्थानमा अहिले खोला बगेको छ । ढोरपाटन जाने सडकको देउरालीबाट खसेको पहिरोले भुजीखोला थुनिएर ताल बनेको र त्यसपछि बाढी आउँदा ठूलो क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।
बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी छ । आज बिहानैदेखि खोजी शुरु भएको छ । स्थानीयले ३५ जना बेपत्ता भएको बताएका छन् । कतिपयको घरमा पाहुनाहरु पनि आएकाले बेपत्ता भएकाहरुको संख्या एकिन भएको छैन । ढोरपाटन जाने सडकको देउरालीबाट खसेको पहिरोले भुजीखोला थुनिएर ताल बनेको र त्यसपछि बाढी आउँदा ठूलो क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाही रिहापछि गरे डी. एस. पि. प्रदिप क्षेत्रीको पर्दाफास | खुट्टा भाच्ने देखि यस्तो यातना (हेर्नुस भिडियो)
दुई बर्ष भयो ,मेरो बुढाले एक पटक पनि मसंग यौनसम्पर्क गरेको छैन म अब के गर्ने होला ??
आज सोमबार चन्द्रग्रहण लाग्दै, कहाँ कहाँ देखिनेछ चन्द्र ग्रहण ?